Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Mankany amin’ny fanjavonan’ireo banky tsy miankina ? · Global Voices teny Malagasy » Print
Kazakhstan: Mankany amin'ny fanjavonan'ireo banky tsy miankina ?
Voadika ny 11 Oktobra 2018 6:10 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika (fr) i Norbert Bousigue, imanoela fifaliana
Sokajy: Kazakhstan, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Tato ho ato, nitrangàna zavatra maro mahalasa saina tany amin'ireo banky kazakh sy ny vidin'ny petrabola kazakh. Nampirodana ny sandan'ny petrabolan'ny banky telo ny famoahana vaovao mampiady hevitra sy tsy nisy fotony, ary niteraka ny fandraisana ho fananam-panjakana ireo banky roa lehibe tsy miankina. Ankehitriny, kely ny fisalasalàna momba ny mety ho naha fanahy niniana izany rehetra izany. Petrakevitra maro no afaka manazava izany. Manohana ny iray amin'izy ireo fa fanafihana ara-bola izany.
Izany no nosoratan'i Arman  tao amin'ny neweurasia [amin'ny teny rosiana] tamin'ny 2 febroary 2009.
Mihevitra ity petrakevitra ity fa antokon'olona sangany ao amin'ny fitondrana, izay nanapa-kevitra ny hanitatra ny fifehezany ny sehatry ny banky, no nikononkonona ity tantara ity. Fotoana vitsy lasa izay, azon'ny sampan'ny orinasa Alnair ny sampana fifehezana teo anivon'ny fampiasambolan'ny Kazkom, banky tsy miankina lehibe ao Kazakhstan .
Tao anatin'ireo banky efatra lehibe hafa, BCC, ATF, Alliance ary ny BTA, lasa ambany fitantanan'ny vahiny ireo roa voalohany. Raho-mitatao lehibe kosa ireo roa farany : amin'ny maha-vondrona tsy miankina manankarena azy, mety afaka hihetsika amin'ny fomba tsy hita hofehezina ireo banky ireo raha toa ka misy ny krizy politika. Ankoatr'izany, samy nisy nifandraisany tamin'ny antoko mpanohitra avokoa ny tsirairay tamin'ireo banky roa ireo (notohanan'ny Alliance Bank ara-bola ny antoko mpanohitra nandritra ny fifidianana, toy ny Kazkom; amin'ny ankapobeny dia ampifandraisina amin'ny haino aman-jerin'ny antoko mpanohitra sy ny hetsika ”Alga” ny BTA). Tsy manana fikasana toy izany ireo banky hafa, satria voageja anatin'ireo vondronorinasa indostrialy sy ara-bola akaikin'ny faribolan'ireo mpitondra izy ireo.
Nanomboka tamin'ny tsaho momba ny fandraisana ho fananam-panjakana ny Temir Bank (sampan'ny BTA) izany ahiahiahy rehetra izany. Navoaka tao anatina gazetiboky iray miresaka toekarena, avy tamina loharanom-baovao tsy fantatra teo anivon'ny fanjakana. Toy ny ahian'i Arman [amin'ny teny rosiana] tao anatin'ny tohin'ny lahatsoratra nosoratany :
Ny hampirodana ny vidin'ny petrabolan'ny banky sy ny fanambaràna azy ireo ho toy ny bankirompitra no tanjon'izany : raha izay no mitranga, araka ny lalàna vao noraisina vao haingana, manana zo ny fanjakana hanaisotra ny fitantanan-draharaha sy haka ilay banky. Mahaliana ny manamarika fa ambaran'ny Fanjakana sy ny Banky Nasionaly amin'ilay orinasa hatrany fa mafy orina ny sehatry ny banky . Efa nisy zavatra nitovy tamin'izany nanjo ny Alliance Bank. Nisy korontana nitranga fotoana fohy taorian'ny nivoahan'ny vaovao iray, izay nikasika ny Bloomberg, momba ny fandraisana azy ho fananam-panjakana, saingy tsy hita eo amin'ny tranonkalan'ity sampandraharahan'ny gazety ara-bola ity izany vaovao izany.
Raha jerena toy izany, manazava ny fanoloana vao haingana ny filohan'ny Banky Nasionalin'i Kazakhstan izany. Fantatra amin'ny maha-ao anatin'ny foko manjakazaka azy ity filoha vaovao ity. Nanamarina ny fandraisany ny fifehezana ny BTA izy, ”raha tsy izany, ho lasa tsy afaka nanome vola intsony ny BTA Bank tamin'ny herinandro lasa teo”. Nanala tamin'ny asany ilay filohan'ny vondrom-pitantanan'ny BTA, i Mukhtar Ablyazov, ihany koa ny Fanjakana satria ”nifanohitra tamin'ny tombontsoan'ireo mpametra-bola, mpampitrosa, sy ireo lalàna manankery ny fihetsiny”, araka ny fanazavan'ny Praiminisitra kazakh i Karim Masimov. Mazava ho azy, fampitandremana an'i Mukhtar Ablyazov, izay gadra politika fahiny izany. Azo inoana fa mety ho tsy maintsy hisafidy ny handeha an-tsesitany izy. An'ny fanjakana avokoa ny 78% ao amin'ny BTA.
Kanefa, miparitaka manerana ny aterineto ankehitriny ny fanambaran'i Ablyazov izay miampanga ny zavatra vao nitranga teo. Ao anatin'ity lahatsoratra ity, mamaritra ny fangalàna ny fifehezana ny bankiny ho hetsika ”jadona sy fangalarana ataon'ny fanjakana” i Ablyazov . Manambara ihany koa izy fa ”Mampiseho ny tsy fahaizina ara-toekarena sy ny politikany fohy fisainana ny fihetsiky ny fanjakana”. Tsy azo antoka fa hametraka ilay raharaha amin'ny fitsarana iraisam-pirenena i Ablyazov, fa mety handresy izy raha toa ka manao izany. An-dalam-pikarakarana ihany koa ny fivarotana ilay banky fahefatra ao Kazakhstan, ny Alliance. Nambaran'ny Praiminisitra fa ny ” vondrona mpampiasa vola Seymar Alliance; tompon'ny petrabola betsaka indrindra ao aminy, no nanolotra [tahirim-panjakana] 76% tamin'ny petra-bolany ho an'ny Samruk Kazyna tamin'ny vidiny 100 tenge (0.64 €) monja”.
Nandritra izany fotoana izany, voatsikera matetika noho ny tsy fahampian'ny mangarahara ireo banky kazakh, ary mety ho tsy tonga lafatra izy ireo amin'izany fomba fijery izany. Kanefa nanamafy ireo mpitondra azy fa afaka miatrika ny famerenana ny trosany ivelany amin'ny 2009, tsy mila fanampiana avy any ivelany. Ary voasoratra ao amin'ireo tsenam-bola iraisam-pirenena, izay manana fepetra hentitra amin'ny famoahana ireo kaonty, ny ankamaroan'ny banky kazakh, ao anatin'izany ny BTA sy ny Alliance. Na izany aza, tena sarotra ny hahazo antoka fa tsy kilalao ady fahefana sy fizarana harena mba ho tombontsoan'ny foko iray fotsiny ihany ireny fanovàna ho fananam-panjakana ireny . Na izany aza, manambara ny filohan'ny BTA teo aloha tao anatin'ny fanambarany fa toy izany no nitranga, ary nizara antso ho an'ny olontsotra ihany koa ny hetsika tiany indrindra, ”Alga”, mangataka ireto farany hoe :
Mitonia ianareo amin'ny toe-javatra toy ireny, izay manohana ny tombontsoan'i Timur Kulibayev  [amin'ny teny anglisy] avokoa ny fihetsika tsy mahay na inona na inona eo amin'ny resaka ara-toekarena, tsy tomponandraikitra amin'ny resaka fitantanana, sy amin'ny fomba fisainana fohy eo amin'ny resaka ara-politika izay ataon'ny Fanjakana sy ny Banky Nasionaly.
Mitanisa io antso io [amin'ny teny rosiana] ao amin'ny blaoginy i dass. 
Manao ity fanehoankevitra ity [amin'ny teny rosiana] eo amin'ny blaoginy i megakhuimyak , blaogera kazakh fanta-daza :
Nandany lalàna iray momba ny fampivelarana ara-bola ny fanjakana, izay milaza fa raha toa ka mandalo toe-javatra sarotra ny banky iray, manana ny zo hanolo ny mpitantana azy sy haka ny petrabola izay manana ny fifehezana azy ny fitondrana. Natao tamin'ny BTA ity fomba fiasa ity. Noroasin'ny fanjakana tamin'ny asany amin'ny maha filohan'ny birao mpitantana azy i Ablyazov ary nalainy ny 78.14% tamin'ny petrabola.
Raha raisina ny zava-misy hoe tany aloha, nanapa-kevitra ny fanjakana fa hividy ny 25%-n'ny Kazkom, BTa, Halyk ary ny Alliance, afaka lazaina ankehitriny fa efa namadika tanteraka ho fananam-panjakana ny sehatry ny banky ao Kazakhstan ny Fanjakana , mifehy 55 hatramin'ny 65% izy, izay, raha atambatra amin'ny fametrahana fiahiana ara-pitantanana, midika ho fitantanana tanteraka.
Nahatezitra an'i Adam-kesher  [amin'ny teny rosiana] ny fanapahankevitry ny Fanjakana hivarotra ny BTA, ilay banky tsy miankina lehibe indrindra manerana ny tontolo sovietika taloha amin'ny Sberbank, ilay banky fehezin'ny fanjakana rosiana. Raha toa ka tena mitranga izany fanapahankevitra izany, mety hanampy singa ara-jeopolitika amin'ireo raharaha mampiady hevitra rehetra izany.
Navoaka tao amin'ny neweurasia  [amin'ny teny anglisy] ihany koa ity lahatsoratra ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/11/126841/
 Timur Kulibayev: http://en.wikipedia.org/wiki/Timur_Kulibayev